MW CMC Oo Kulan Layeeshay Hogaamintii Lasoo Xulay - Cakaara News
MW CMC Oo Kulan Layeeshay Hogaamintii Lasoo Xulay
Jigjiga(Cakaaranews) Arbaco, 28ka September 2016. Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa galabta kulan layeeshay 34 xubnood oo loo soo xulay hogaaminta degmooyinka cusub iyo qaar kamid ah kuwii hore islamarkaana mudo bil iyo dheeri ah qaadanayay tababar muhiim ah oo katurjumaya nidaamka hogaamineed ee degmooyinka.
Hadaba, madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa xubnahan usheegay inaan lagu soo xulanin qabiil, eex iyo nin-jeclaysi midnaba balse lagu soo xushay nidaam xisbinimo iyagoo dhan walba laga eegay interviewgii, heerkooda aqoonta, shaqo-wanaagoodii iyo khibradaha shaqooyinkii hore. Wuxuuna kalahadlay qaab-shaqeedka loo baahan yahay inay kuhawlagaan oo ah nidaamka maamulka suuban ee kusalaysan aragtida shacabka, mida horumarineed, nabadgelyo, dareenka wadaniyadeed ee kudhisan kadamqashada hantida shacabka iyo waliba nidaamka maaraynta iyo meel-marinta qorshayaasha waxqabad iyo kuwa miisaaniyadeed oo loo hirgaliyo sidii loogu talagalay. Wuxuuna kubooriyay inay dardargaliyaan shaqooyinka iyagoo muhiimada ukala siinaya sida ay ukala culus-yihiin. Madaxwayne CMC ayaana kuladar-daarmay xubnaha hogaamintan inay kadhawrsadaan musuqa, eexda, qabyaalada iwm islamarkaana ay isula halgamaan si xisbino leh iyagoo laga rabo inay shacabka ugu adeegaan si daacadnimo, wadaniyad, kalsooni iyo xil-kasnimo kudheehan tahay. Wuxuuna hadalkiisii kusoo xidhay inay xubnahani maalinta barri ah ay gacantooda bakhtiyaa-nasiib kuqaadan doonaan degmooyinkii lagu meelayn lahaa.
Dhanka kalana, xubnahan lasoo xulay ayaa bogaadiyay lakulanka madaxwaynaha islamarkaana kamahadceliyay. Waxayna balanqaadeen inay kasoo bixi doonaan xilka loo magacaabo islamarkaana ay waajibaadkooda shaqo ugudan doonaan si hagar la’aan ah iyagoon u eegaynin eex iyo nin jeclaysi midnaba. Waxayna intaa raaciyeen inay diyaar uyihiin meel kasta oo lagu meeleeyo deegaanka.